SETELA / Varavarana misokatra – FJKM
Sehatra iray natao hanofanana sy hampianarana ny Laika ny SETELA. Ao anatin’ny fankalazana ny faha25 taonany izy ankehitriny. Izany indrindra no nanatanterahany varavarana misokatra ho an’ny rehetra ny Sabotsy 03 Novambra 2018, mba ho fampahafantarana ny olona rehetra ny mombamomba ny SETELA.
Nandritra izany fotoana izany no nanehoana ho an’ireo tonga nanatrika ny varavarana misokatra ny tantaran’ny SETELA sy ny maha izy azy, tsiahy ny tantaran’ny SETELA, fampirantiana asa soratra sy sary samihafa, tao ihany koa no nanentanana sahady ireo olona mba handray ny taratasim-pisoratana anarana ho an’ny taom-pianarana 2019.
Tonga nanotrona io fotoana io ihany koa ny raiamandreny anisany nanorina ity sehatra ity dia Andriamatoa RAMINO Paul, Mpitandrina. Tao anatin’ny fotoana nanaovana ity varavarana misokatra ity ihany koa no
nanafanan’ny tarika maro ny fotoana toa ny tarika Mialy RAKOTOMAMONJY, Ny tarika R’IMBOSA,…
Nisy fotoana ihany koa nanehoana ny « bibliothèque numerique », izay ahitana ny asa soratr’ireo mpianatra efa nahavita ny fiofanany nandritry ny 2 na 3 taona teo anivon’ny SETELA.